8.1 Lahatsoratra amin'ny tsipika - Geofumed
Amin'ny tranga maro, ny anaran'ny firaketana sary iray dia misy ny iray na roa ny teny. Matetika dia jerena ao amin'ireo drafitra maritrano, ohatra, ny teny hoe «Kitchen» na «North Facade». Amin'ny toe-javatra tahaka izany, ny lahatsoratra amin'ny andalana iray dia mora mamorona sy mitady. Amin'izany dia afaka mampiasa ny baiko "Text" isika na ny bokotra mifanentana amin'ilay andiany "Text" amin'ny tabilao "Annotate". Raha manao an'izany dia ny varavarankely tsipika dia mangataka antsika hanondro ny fandrindrana ny teboka fampidirana lahatsoratra. Mariho koa fa manana safidy roa isika: «Manamarina» sy «Style», izay horesahantsika aoriana kely. Mandritra izany fotoana izany, tokony hampiana fa tsy maintsy asongadintsika koa ny haavon'ny haavon'ilay lahatsoratra. Ny mari-pahaizana avy amin'ny Zero dia manome antsika andinin-teny miorim-paka ary, indray, ny mari-pahaizana tsara dia mandeha tsy mihetsika. Farany, afaka manoratra ny lahatsoratra isika.
Araka ny hitanao, amin'ny faran'ny fanoratana andalana iray dia afaka manoratra «ENTER» isika, izay mamela Autocad hanoratra andalana hafa amin'ny tsipika manaraka, fa io andininy vaovao io dia ho zavatra mahaleo tena amin'ny tsipika voalohany efa voasoratra. Na dia alohan'ny fanoratana an'io andinin-teny vaovao io dia azontsika atao ny mamaritra miaraka amin'ny totozy ny faritra fametrahana vaovao eo amin'ny efijery.
Ny safidy "jUstificación" ao amin'ny varavarankely baiko dia ahafahantsika misafidy ny teboka an-tsoratra izay hifanaraka amin'ny teboka fampidirana azy. Amin'ny teny hafa, amin'ny alàlan'ny famaritana, ny teboka an-dahatsoratra dia ny zoro ankavia amin'ny fototry ny taratasy voalohany, fa raha misafidy hevitra hafa isika, dia ho "hamarinina" ny famakiana azy, mifototra amin'ny teboka misy azy avy. fampidirana. Ireto ny teboka asan'ny soratra:
Izay mazava ho azy dia mifanandrify amin'ny safidy manaraka rehefa misafidy ny "jUstify."
Angamba ianao mampiasa foana ny ankavia fanamarinana sy manamarina ny andinin-teny ny amin'ny tsipika nijery ny toeram-panisifana (Farany mihevitra fa ny teny tsipika zavatra iray dia afaka hifindra mora foana, araka ny ho hitantsika ao amin'ny toko natokana ho fanovana zavatra) . Fa raha te-ho marina tsara momba ny toerana misy ny andinin-teny, dia ho fantatrao sy mampiasa ireo safidy fanamarinana.
Previous Post«Previous TOKO XENOMA: TEXT
Next Post 8.1.1 Sava amin'ny lahatsoratramanaraka »